०७:४३, ३ सेप्टेम्बर २०११ जस्तै गरी पुनरावलोकन
भाषामा देखिएका अशुद्ध शव्दहरुको शुद्धिकरण using AWB (7794)
२१:११, १४ अगस्ट २०११ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने)
०७:४३, ३ सेप्टेम्बर २०११ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने) (रद्द गर्ने)
[[Image:मत्स्यावतार.jpg|100px|thumb|भगवान मत्स्य भक्तहरुको उद्धार गर्दै]]
हिन्दू धर्म ग्रन्थका अनुसार प्राचिन कालमा सत्यव्रत नामका एक राजा थिए। उनि ठुलाठूला उद्धारवान र भगवानका परम भक्त थिए। एक दिन उनी कृतमाला नदीमा तर्पण गर्न लागेका थिए यसै बेला उनको हातम एक सानो माँछो आयो। माँछाले राजालाई भने "हे! महाराज यी नदीका जिव तथा ठुलाठूला माँछाहरुले मलाई खान्छन् अत: तपाईँ मेरो रक्षा गर्नु होस्।"
माँछाको विन्ती सुनेर दयालु राजा सत्यव्रतले माँछालाई आफ्नो कमण्डलुमा राखे। केही छिनमै मत्स्य बढेर कमण्डलुमा न अटाउने भए। यो देखेर उदार वादी सत्यव्रतले मत्स्यलाई एक मट्कामा राखे। केही छिन पछी मत्स्य बढेर मट्कामा पनि न अटाउने भए। यो देखेर राजाले पुन: मत्स्यलाई एक तलाउमा राखे। केही छिनमै मत्स्य तलाउमा पनि न अटाउने भए। अन्तमा राजा सत्यव्रतले हार मानी मत्स्यलाई समुद्रमा छोड्ने निधो गरे। यो देखेर मत्स्यले "महाराज ! समुद्रमा त झनै ठुलाठूला जलिय जिवहरु छन् तिनले मलाई खाई दिन्छन् मलाई समुद्रमा न छोड्नुहोस्" भनि विन्ती गरे। मत्स्यको यो मधुर वाणी सुनेर राजा मोहित भए राजाले भगवानको लिला हो भन्ने थाह पाए। राजाले हात जोरेर भगवान मत्यको प्रार्थना गर्न लागे।
हे प्रभु! हे गुण निधान! जति मैले यो संसारमा चिजहरु देख्छु तपाईले त्यो सबैलाई एकै छिनमा नास गर्न सक्नु हुन्छ। तपाईबाटनै यो सृष्ठीको शृजना भएको हो। तपाईँ नै यसको पालन गर्नु हुन्छ। तपाईँ एक अदृश्य शक्तीको रुपमा व्याप्त हुनुहुन्छ। यो संसार तपाईँको शरिर हो, चन्द्र र सूर्य तपाईँका नेत्रहरु हुन्, यो वायू तपाईँको स्वाँस हो। मेघहरु तपाईँका केश हुन्। तपाईँको लिला ठूला ठुलाठूला नारद, बशिष्ठ, कश्यप दुर्बाशा,आदी तपश्वी ऋषि मुनीहरु ईन्द्र, बरुण, ब्रह्मा, आदी देवतागणहरुले त थाहा पाउन सक्दैनन् भने म एक सामान्य मर्त्य चोलाको मनुष्यलाई के थाहा हुनु मैले तपाईँको लिला थाहा न पाएर जो आफ्नो घमण्डीपना देखाएँ त्यसमा मलाई क्षमा गर्नु होस्। म मात्र नभएर यो सारा जगत नै तपाईँको दाश हो। मेरो भक्ती ठुलोठूलो थियो जसले गर्दा तपाईँले म माथी कृपा गरेर दर्शन दिनु भयो म धन्य हुँ जसको दर्शनको लागी यो सारा जगत नै तडपीरहेको छ उनको मैले सहजै दर्शन पाएँ र सेवा तथा प्रार्थना गर्न पाएँ। जसको बल वायू समान छ, जसको पानिको जस्तै मधुरता र सूर्य समान तेज छ। जसमा फूल समान कोमलता र विजुली झैँ चमक छ। जसको मेघको समान वाणी छ जो चराचर जगतको सृष्टी कर्ता, पालन कर्ता र संहार कर्ता हो उन प्रमेश्वरलाई मेरे बारम्बार प्रार्थना छ।
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/157234" बाट अनुप्रेषित